Adobe Illustrator CS2 Rohy misintona maimaim-poana
Photo Retouching Services > Retouching Blog > Malagasy Blog > Adobe Illustrator CS2 alaina maimaim-poana
By Ann Young, Mathis Ravatomanga 2022-05-04, Malagasy Blog
Fahazoan-dàlana: Andrana maimaim-poana
Te hampiasa ny Adobe Illustrator CS2 rohy fampidinana maimaim-poana fa ny tolotra rehetra toa tena mampiahiahy? Vakio ity lahatsoratra ity ary fantaro ny fomba hahazoana dikan-teny ara-dalàna amin'ny Adobe Illustrator CS2 izay ahafahana mamorona sora-baventy, karatra fandraharahana, ary famolavolana tranokala.
Adobe Illustrator CS2 Tombontsoa
Fametrahana ny tsipika sisiny mifandray amin'ny contour
Mamorona sary ho an'ny gadget finday
Mamorona sary grayscale
Fanohanana mahazatra PDF/X
Tontolo iasana voabaiko
Inona no atao hoe Adobe Illustrator CS2?
Adobe Illustrator CS2 dia rindrambaiko sary vetaveta ampiasain'ny mpamorona amin'ny sehatra isan-karazany, toy ny sary nomerika, sary ary fanontana. Izy io dia fitaovana mety hamolavola karazana loharano multimedia, fitaovana fanontam-pirinty, atiny Internet, fitaovana ifanakalozan-kevitra, horonan-tsary ary fampiharana finday.
Azo atao ve ny misintona kinova ofisialy Adobe Illustrator CS2?
Indrisy fa tsy misy intsony ity dikan-teny ity. Efa nofafan'ny mpamorona tamin'ny tranokala io kinova io hatry ny ela satria efa lany andro ny fiasany ary tsy mifanaraka amin'ny fepetra maoderina ataon'ny mpamorona sary. Na izany aza, ny kinova farany an'ny Illustrator dia azo alaina alaina.
Ohatrinona ny vidin'ny Adobe Illustrator?
Ny fandoavam-bola isam-bolana ho an'ny Adobe Illustrator dia miovaova amin'ny $20.99 ka hatramin'ny $52.99 arakaraka ny drafitra famandrihana nofidinao. Ankoatr'izay, manolotra ny orinasa Adobe Adobe Creative Cloud fihenam-bidy izany dia hanampy anao hitsitsy vola sy hividianana dikan-teny manana fahazoan-dàlana miaraka amin'ny fihenam-bidy ampy.
Misy dikan-teny maimaim-poana ve ary hafiriana no azoko ampiasaina?
Azonao atao ny mampiasa ny kinova Fitsapana maimaim-poana mandritra ny 7 andro hitsapana azy alohan'ny hividianana. Ho fanampin'izay, ho azonao ny fiasa rehetra hita ao amin'ny Illustrator.
Manohana add-ons ve ny Adobe Illustrator?
Rehefa nampitaha Illustrator vs Photoshop, Hitako fa ny programa roa dia mamela ny fametrahana borosy matihanina fanampiny, endri-tsoratra ary plug-in. Azonao ampiasaina koa Kisary Adobe Illustrator hiasa amin'ny drafitry ny tranokala.
Fomba hafa hampiasana Adobe Illustrator CS2 maimaim-poana
Misy fomba roa ahazoana ity programa ity - ny misintona azy ho fampiharana tokana na ho ampahany amin'ny Creative Cloud.
Fahazoan-dàlana: Dika andrana
Mifanaraka: Win / Mac
Tombontsoa amin'ny Adobe Creative Cloud:
Fahafahana mampiasa ny programa Adobe rehetra
Mifidy ny famandrihana, azonao atao ny mampiasa ny programa rehetra novolavolain'ny orinasa Adobe mba hamelona ireo hevitra mamorona indrindra. Ho fanampin'izay, hahazo fidirana amin'ny fitahirizana rahona amin'ny haben'ny 100GB ianao Adobe Portfolio, endri-tsoratra premium ary lesona an-tserasera momba ny fifehezana Illustrator.
Mianara bebe kokoa momba ny Andrana maimaim-poana Adobe Creative Cloud.
Matetika ny mpampiasa maro no manomboka mitady Adobe Illustrator crack na Adobe Illustrator torrent tsy handoa ny famandrihana. Mety ho hitanao koa Adobe Illustrator keygen, izay heverina ho safidy azo antoka amin'ny dikan-teny voajirika ankehitriny. Saingy tsara kokoa ny tsy mampidi-doza ny fametrahana rakitra toy izany ary mianatra momba ny voka-dratsy rehetra mifandraika amin'ny fampiasana azy ireo.
Raha mampiasa dikan-teny voajirika ianao dia lasa mpanao heloka bevava. Misy lalàna maromaro any Etazonia miaro ny zon'ny mpamorona ary mikendry ny hiadiana amin'ny rindrambaiko piraty. Ho fanasaziana dia tsy maintsy mandoa lamandy manomboka amin'ny $1000 ianao na mety hampidirina am-ponja mandritra ny 3 taona farafahakeliny.
Eo am-pametrahana programa voajirika dia mety hahita tolo-kevitra ianao mba "hamisotra ny antivirus" ao amin'ny torolàlana fametrahana. Mitranga izany satria hitan'ny rafitra ho tsy ara-dalàna ny rakitra iray ary misy viriosy. Amin'ny fomba toy izany, ny fametrahana pirate Adobe CS2 kinova maimaim-poana, dia mety hamindra ny rafitrao amin'ny malware izay hangalatra ny angon-drakitrao momba ny carte de crédit na ny mombamomba anao manokana.
Mba hiarovana ny PC-nao dia manoro hevitra aho ny hampiasa ny rindrambaiko antivirus maimaim-poana tsara indrindra.
Tsy misy fanohanana ara-teknika. Kitapo sy Lugs
Ny fametrahana programa voajirika dia tsy mahazo fanavaozana sy fanohanana ara-teknika izay hanampy anao raha misy olana mitranga. Ny fahasarotana toy izany dia saika amin'ny tranga rehetra. Ohatra, ny fanakatonana tampoka ny programa, ny tsy fisian'ny asa manan-danja maro, ny tsy fahafahana manafatra rakitra, sns.
Raha tokony hitady rohy fampidinana maimaim-poana Adobe Illustrator CS2 voajirika, dia fantaro ireo safidy maimaim-poana izay miantoka ny fahombiazan'ny kalitao sy matihanina.
Fitaovana mahasoa maro
Fanohanana endrika tsara
Overloaded interface tsara
Inkscape dia iray amin'ireo safidy tsara indrindra amin'ny Adobe Illustrator. Manolotra fiasa mitovy amin'izany izy io, toy ny fanaovana sketsa, sary ary fitaovana fanitsiana. Fanampin'izay, manana lakile hivezivezena sy hihodinana amin'ny alàlan'ny pikantsarin'ny efijery, tracing bitmap, hosodoko miloko amin'ny zavatra, ary hanova ny gradient amin'ny tahony.
Inkscape dia fitaovana ho an'ny manam-pahaizana matihanina na semi-matihanina mandray anjara amin'ny famolavolana tranonkala. Izy io dia programa open-source ka azonao ovaina ny kaody loharano ary ampidirinao amin'ny rindrambaiko hafa.
Amin'ny fampiasana Inkscape, azonao atao ny manokatra sy manafatra endrika isan-karazany, toy ny SVG, PDF, EPS, AI ary CDR. Miasa tsara amin'ny Windows, Mac ary Linux izy io. Ny hany tsy fahampiana dia ity programa ity dia mety miadana indraindray.
Hamantatra bebe kokoa Adobe Illustrator alternatives.
Tranomboky lehibe momba ny fananana vector
Ity programa ity dia afaka mampifaly anao amin'ny fitaovana fanodinana vector fototra, toy ny pen, tsipika, antsy, slice, bezigon, gradient editor. Ho fanampin'izay, manome endri-javatra nohatsaraina ihany koa izy, toy ny safidy boolean, marika, fanohanana lahatsoratra iraisam-pirenena, sns.
Gravit dia manasongadina UI intuitive izay tena mora ampiasaina. Fanampin'izay, be dia be ny fampianarana video misy fampahalalana. Ity rindrambaiko ity dia miasa amin'ny navigateur, ka azonao ampiasaina na aiza na aiza ahafahanao mifandray amin'ny tambajotra.
Izy io dia manohana endrika isan-karazany, toy ny PDF, PNG, JPG, SVG, ary Sketch ka mahatonga azy ho mora kokoa noho ny Illustrator.
Fantaro bebe kokoa free graphic design software.
Tsy natao ho an'ny PC malemy
Sketch dia rindrambaiko programa matihanina ho an'ny sary vetaveta novolavolaina ho an'ny mpampiasa mamorona.
Noho ny interface tsotra sy mora, Sketch dia manana fiasa maro mitovy amin'ny an'ny Illustrator sy Photoshop, ao anatin'izany ny asa miaraka amin'ny sosona, gradients, palette miloko ary fomba.
Sketch dia mirehareha amin'ny fahaiza-manova sary vector lehibe. Ny mpampiasa dia milaza fa tena mora ampiasaina izy io ary manome endri-pandaminana mahery vaika / mofo. Ankoatr'izay, Sketch dia manolotra andiana fampianarana feno.
Mianara bebe kokoa momba ny rindrambaiko sary maimaim-poana tsara indrindra.
Na inona na inona programa napetrakao dia manoro hevitra aho ny hampiasa ireo fitaovana maimaim-poana ireo mba hahatonga ny fizotran'ny famoronana sary ho haingana sy tsara kokoa.
Azonao atao ny mampiasa an'io borosy setroka io amin'ny karazana sary na sary maro. Ny zava-dehibe indrindra dia ny tsy hihoatra ny ranomasina. Mifindra avy any amin'ny ilany havia miaraka amin'ny kapoka maivana ny setroka.
Ity rafitra plaid mamirapiratra ity dia mety amin'ny fanoharana isan-karazany saingy heveriko fa mety amin'ny sora-baventy sy fanasana.
Ity endri-tsoratra ity dia manampy amin'ny famoronana effet grunge amin'ny sary na sary rehetra. Ny vokatra toy izany dia azo atao satria ny litera dia ampiana amin'ny kapoka manify sy tsy mitovy.
Misintona Adobe Illustrator maimaim-poana ho an'ny Win / Mac
Ampidino maimaim-poana ny Adobe Creative Cloud
Ampiasao ny rohy fampidinana maimaim-poana Adobe Illustrator CS2 mba hahazoana programa ara-dalàna sy kalitao ho an'ny PC-nao. Mety tsy hanahy momba ny traikefanao ianao satria mety tsara ny programa, ho an'ny vao manomboka sy matihanina.
Tombontsoa Adobe Illustrator CS2
CS2 piraty version
Maimaim-poana Adobe Illustrator CS2